5 ဥရောပမှာတော့ Ice Cream စားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့ Ice Cream စားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ
ဥရောပသွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လုံလောက်တဲ့ကံကောင်းခဲ့ကြသောသူတို့ကကမ်းလှမ်းသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အသိစွန့်စားမှုသိ. ဥရောပတိုက်တွင်ခရီးသွားလာ မျိုးစုံနည်းလမ်းသင်၏အသက်တာကြွယ်ဝစေနိုင်ပါတယ်. ဘာသာစကားများထံမှ, စိတ်ကူးမြင်ကွင်းများ, နှင့်သမိုင်းသင်အိမ်ပြန်မတှေ့နိုငျသောစိတ်ကူးအစားအစာ. ရေခဲမုန့်များအတွက်အထူးသဖြင့်ချိုမြိန်သွားရှိသည်သောသူများသည်အံ့သြဖွယ်အရာတစ်ခုခုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်. ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးအမျိုးမျိုးသောရေခဲမုန့်ဆိုင်ခန်းစိတ်ကူးအရသာတစ်ခုပေါက်ကွဲမှုပူဇော်. နောက်ဆုံးတော့, ရေခဲမုန့်တစ်မြို့ရှာဖွေစူးစမ်း၏ရှည်လျားသောနေ့ကအပြီးပြန်အရိပ်၌ထိုင်နှင့်အပန်းဖြေရန်ပြီးပြည့်စုံသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဥရောပမှတဆင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ရေခဲမုန့်ကိုနှစ်သက်ကြသည်နေတယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ဟာဥရောပမှတဆင့်ခရီးသွားလာ၌အကြှနျုပျတို့၏ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံကိုယူနှင့်အတူတူသင်တို့အဘို့စာရင်းတစ်ခုထားကြပြီ. ထိုကွောငျ့, ဒီမှာတချို့ရှိနေပါတယ် အကောင်းဆုံးသောနေရာများ ဥရောပတိုက်တွင်ရေခဲမုန့်စားရန်.
အဘယ်မှာရှိ Ice Cream ခုနှစ်တွင်အီတလီနိုင်ငံစားရန်?
အီတလီနိုင်ငံအသက်တာ၏က၎င်း၏မေတ္တာသည်ကျော်ကြားခြင်းနှင့် အရသာအစားအစာ. သူတို့ရဲ့ရေခဲမုန့်နှစ်ခုပေါင်းစပ်ဟန်. အတော်များများရေခဲမုန့်ချစ်သူတွေကိုသင်စစ်မှန်အီတလီ gelato တစ်ကျုံးကိုမြည်းစမ်းခဲ့ကြသည်အထိသင်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းသဘောတူ. ငွေရတတ်သောသူအရသာနှင့် texture ရေခဲမုန့်ကိုသူတို့ယာဉ်အကြောင်းကိုအသည်းအသန်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဖန်ဆင်းခဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းညွှန်းကိန်းများမှာ. သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးရေခဲမုန့်ရာအရပျကိုဖြတ်ပြီးလာရန်လုံလောက်သောကံကောင်းလျှင်ကြောင့်.
ရောမမြို့ဥရောပအကောင်းဆုံးရေခဲမုန့်ဆိုင်ခန်းများ၏တဦးတည်းမှနေရာဖြစ်သည်, နို့အဖြစ်. အဆိုပါမြို့ရေခဲမုန့်ချစ်သူများနှင့်ပြည့်ဝ၏. gelato ခံစားလူများ picturesque မြင်ကွင်းများပုံမှန်များမှာ. သို့သျောလညျး, မရေမတွက်နိုင်သော gelato ဆိုင်များနှင့်အတူတစ်မြို့အတွက်, တအဖြစ်ထွက်ရပ် ဝှက်ထားသောကျောက်မျက် မည်သည့် gelato ချစ်သူများသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်ကြောင်း. မရေမတွက်နိုင်သောခရီးသွားဧည့်နှင့်ဒေသခံများအီလတ်လာကြမှစုပြုံ. အဘယ်အရာကိုသင်မေးစေခြင်းငှါ, သူတို့ရဲ့ရေခဲမုန့်နိုင်အောင်ထူးခြားတဲ့စေနိုင်သည်? ပထမဦးစွာ, များစွာသောလူသူတို့ကပူဇော်သူဌေးနှင့်အရသာအရသာကိုခံစား. သူတို့ကနေ့စဉ်မိမိတို့၏ gelato ပွငျဆငျခွငျးနှငျ့သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ၏အသုံးပြုမှုကိုအောင်. သူတို့ရဲ့ Ice Cream ချမ်းသာ creamy များမှာ, နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အကြံပြုအဖြစ်. သငျသညျကိုအံ့ဩနေတယ်ဆိုရင်အီလတ်နည်းလမ်းအဘယျသို့လာကြ, သငျသညျကဘာသာကိုသိရန်ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည် “နို့လိုပဲ”. နို့ကိုမုန်းသူများပင်သူတို့၏နို့ရည်အရသာကိုခံစားနိုင်သည်. အရသာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒုတိယအ, လူတွေဆိုင်၏လေထုကိုးကွယ်. ဒါဟာရောမမြို့၏အနှစ်သာရနှင့်ခံစားထည့်သွင်း.
အဘယ်မှာရှိ Ice Cream ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီစားရန်?
Fantastic ရေခဲမုန့်သည်များစွာသောဂျာမနီနှင့်ပေါင်းသင်းသောအရာမဟုတ်ပါ. သို့သျောလညျး, Ballabeni ရေခဲမုန့် ယင်း၏မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ထက်တောင်ဦးနဲ့ပြောင်းလဲပစ်ရန်ဒီနေရာကိုဖြစ်ပါသည်. ဤထူးခြားသောရေခဲမုန့်ဆိုင်လေးသည်မြူးနစ်တွင်တည်ရှိပြီးအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်. နန်းတော် Giorgio Ballabeni ပိုင်, ရေခဲမုန့်အောင်၏အနုပညာအတွက် grandmaster. သူကရေခဲမုန့်ကိုဝါသနာတစ်ခုအနေနဲ့စတင်ခဲ့တယ်, နှင့်မြူးနစ်အပေါငျးတို့သကကျေးဇူးတင်ဖြစ်ပါသည်. အတော်များများလှည့်ခရီးသည်များနှင့်ဒေသခံများစတိုးဆိုင်ကိုချစ်, မယုံနိုင်စရာသုံးသပ်ချက်များချန်ထားပါ. သင်သည်သူတို့၏ရေခဲမုန့်ကြိုးစားတဲ့အခါ, ဒါဟာဘာကြောင့်ကြည့်ရှုရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်. သူတို့ကစုံလင်ဖို့သူတို့ရဲ့ယာဉ်ရယူနိုင်ပါတယ်နှင့်သူတို့၏လယ်ပြင်၌အကောင်းဆုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏ပါပြီ. သူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတိုင်းကျုံးအတွင်းကတဆင့်လာ. တစ်ဦးအပိုဆောင်းဆုကြေးငွေသူတို့ရေခဲမုန့်ထရပ်ကားများနှင့်ပုဂ္ဂလိကပါတီများမှဖြည့်တင်းနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ!
အဘယ်မှာရှိ Ice Cream ခုနှစ်တွင်ဟန်ဂေရီစားရန်?
သငျသညျအစဉျအမွဲဟန်ဂေရီ၏မြို့တော်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေသင့်တယ်, သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့သေချာပါစေ Gelarto Rosa. ဤသည်အံ့သြဖွယ်ရေခဲမုန့်စတိုးဆိုင်ထဲမှာဖြစ်ပါသည် ဘူဒါပက်၏နှလုံး. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အစဉ်အလာနှင့် ပတ်သက်. များမှာ, ရင်းနှီးမှု, စိတ်ကူးယဉ်သီချင်း, နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု, သူတို့ရဲ့အလုပ်အတွက်မြင်နိုင်ရာဖြစ်ပါသည်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သူတို့လယ်ပြင်၌စစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်ကြသည်. အဖြစ်ဝေးသူတို့၏ရေခဲမုန့်အဖြစ်, သငျသညျကိုသူတို့ကသာအကောင်းဆုံးအော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများအသုံးပြုစကားကိုနားထောငျဖို့ပျော်ရွှင်ပါလိမ့်မည်. တိုင်းအလွန်ကြီးစွာသောရေခဲမုန့်ဆိုင်တစ်ဆိုင်အတုရေခဲမုန့်ကိုရှောင်. သို့သျောလညျး, အဘယ်အရာကို Gelarto ရိုထူးခြားတဲ့စေသည်နေတဲ့နှင်းဆီသို့ရေခဲမုန့်ပုံဖော်ဖို့သူတို့ရဲ့မှုပညာရှငျနှငျ့ချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါတယ်. သင် Szent Istvan တွင်အမြဲရှိနေလျှင် ပူပြင်းသောနေ့၌ရင်ပြင်, နှင်းဆီပန်းရေခဲမုန့်နှင့်အတူလူအများလှည့်ပတ်နေသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်.
နောက်တစ်ကြိမ် must-visit ရေခဲမုန့်ဆိုင်ဇူးရစ်ကနေဖြစ်ပါတယ်. ထ အာဂျင်တီးနားကနေသူ့ရဲ့လှုံ့ဆော်မှုတယ်တဲ့ရေခဲမုန့်ခန်းမဖြစ်ပါသည်. တည်ထောင်သူ Rofe Bote ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမျှနေထိုင်ခဲ့နှင့်ယဉ်ကျေးမှုအတွက်ယူ. သူကသူတို့ရဲ့ fruity နှင့်အတူအထင်ကြီးခဲ့ပါတယ်, လန်းဆန်း, နှင့်သဘာဝရေခဲမုန့်. သူဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှသူတို့ကိုဆောင်ခဲ့သောဒီတော့သဘောကျခဲ့သည်. ယနေ့တွင်ဇူးရစ်နှစ်ခုစျေးဆိုင်ရှိပါတယ်, သူတို့အာဂျင်တီးနားအမြစ်များမှပုံစံမျိုးရယူ. သငျသညျအခြို့သောအရသာရေခဲမုန့်ကိုခံစားအဖြစ်သွက်ဂီတနှငျ့လကျတငျခံစား ပို. ပင်သင့်ရဲ့ဝိညာဉ်များရုတ်သိမ်းပေးရန်သေချာ. Hasta အာဂျင်တီးနားအရသာတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရောစပ်သည်နှင့်ဆွစ်ဇာလန်လိမ္မာပါးနပ်.
ပြင်သစ်ခုနှစ်တွင် Ice Cream
ပြင်သစ်အမှုအရာတွေအများကြီးကျော်ကြားများမှာ. ပထမဦးစွာ, အနုပညာအဘို့မိမိတို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ, ဗိသုကာအတတ်ပညာ, နှင့်ဒဿန, ငြင်းဖြစ်သော. ပဲရစ်ကြောင်းမှအသက်ရှင်သောသတ္တဝါသေတမ်းစာပင်ဖြစ်သည်. ဒုတိယအ, သူတို့ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ချက်ပြုတ်ဘို့လူသိများကြသည်. ပြင်သစ်မီးဖိုချောင်အရှိဆုံးအလွန်အမင်းကမ္ဘာပေါ်မှာ rated ကြားတွင်ရှိပါတယ်, သင်မီးဖိုချောင်ထဲမှာစည်းကမ်းသူတို့ရဲ့သဲကန္တာရ၌ထပြခနြိုငျ. အစားအစာအဘို့ဤစိတ်အားထက်သန်မှုကြောင့်, ဒါကြောင့်သူတို့ကဥရောပအကောင်းဆုံးရေခဲလိမ်းဆေးအချို့ရှိသည်သောအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်.
လူကြိုက်အများဆုံးသောသူတို့၏တစ်ခုဖြစ်ပါသည် Berthillon. ဤသည်ပဲရစ်အကျော်ကြားဆုံးနန်းတော်တစ်အကြောင်းပြချက်ကောင်းဘို့ဖြစ်၏. အဆိုပါ 60 ထဲမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်နှင့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကအရသာရေခဲမုန့်အမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့. သင်သည်သူတို့၏အရသာအရသာတွေထဲကရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့များမှာ, ပင်သင်တို့အဘို့အညာဘက်ကိုပေါင်းစပ်ကိုရှာဖွေမွှေနှင့်အရသာကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်.
သငျသညျခရီးသွားဖို့ရှေးခယျြနေရာတိုင်းမှာ, သငျသညျရေခဲမုန့်ကောင်းတစ်ခုကျုံးပျော်မွေ့ဖို့သေချာ. ကိုယ့်ကိုပြန်ထိုင်ဖို့သတိရပါနှင့် ရှုခင်းကိုခံစား နှင့်သင်ပြုသည့်အခါအရသာဒါ. အတွက်ကအားလုံးကို ယူ. ထိုအထူးထူးအပြားပြားသောအရပ်တို့ကိုမအတွက်ရေခဲမုန့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်အရသာအရသာ.
ဥရောပကမ်းလှမ်းရန်ရှိပြီးသောအရသာနှင့်အနံ့အရသာကိုခံစားဖို့အဆင်သင့်? စာအုပ်၏ရထားလက္မွတ္မ်ား ယခု. ပြီးနောက်, ဥရောပမှာအရသာရှိတဲ့ရေခဲမုန့်ကမ္ဘာကိုသင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့ Ice Cream စားရန်အကောင်းဆုံးနေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဓာတ်ပုံနှင့် စာသားကို ရိုက်ယူနိုင်ပြီး ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သို့ လင့်ခ်တစ်ခုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ခရက်ဒစ်ပေးရုံဖြင့် သော်လည်းကောင်း ပေးနိုင်ပါသည်။. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-places-eat-ice-cream-europe%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / ကြောင်းနှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများက de မှ / TR အဆိုပါ / ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ပါတယ်.
#စိတ်လျော့သည်	#ရေခဲမုန့်	#ခရီးသွား	ယူရိုခရီး	အစားသောင်းကြမ်းသူ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားတရုတ်, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ပိုလန်ခရီးသွားလာပိုလန်, Train Travel စကော့တလန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
4 ရထားဖြင့်ဥရောပမပေးတဲ့ခုနှစ်တွင် Underrated နေရာများ
ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်